Ebe obibi maka quails na aka aka ha: esi eme ebe na ebe ịzụta ihe dị njikere, ụdị plastik, osisi na plywood owuwu, foto na vidio - Ugbo - 2019
Na-eme cages maka quail mee ya n'onwe gị
Ebe ndị dị na ya bụ ihe oriri na-edozi ahụ, nke a na-emetụta anụ nke nnụnụ ndị a na nsen ha a tụrụ atụ. Ọ na-apụta na ịzụlite ha na ụlọ dị mfe, ma na mbụ, anyị chọrọ oghere, nke anyị ga-agbalị ịkọwa.
Ụlọ maka quails nwere ike ịbụ ụgbụ, site na plywood na ọbụna plasticya mere, a ghaghị ilecha ụlọ nke quail anya, nke bụ isi na-adabere na njirimara nke ndụ dị mma nke obere nnụnụ a.
Isere quail ha ga-enwe ahụ iru ala n'ime ogige nke nwere otu mita square, na-emepụtapụta mmanụ ruo ihe dịka 48 kwa ụbọchị.
Isi ọnọdụ maka ọdịnaya ha - na-echekwa ọnọdụ okpomọkụ n'oge niile na 18-20 Celsius C. Mpekere okpomọkụ nke ihe na-erughị 12 Celsius C na ihe karịrị 25 Celsius ga-ebibi.
Mgbe ị na-eme nkedo onwe onye maka quails, jide n'aka na ị na-eji eserese ndị a na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ n'okpuru ma na-agbaso n'omume ndị a tụrụ aro, a nwalere ihe nile n'omume ruo ogologo oge ma tinye ya na ndụ ọtụtụ puku ndị na-ahụ maka obere nnụnụ.
Kedu ihe kwesịrị ịbụ cell?
Kedu otu esi eme ya n'onwe gị?
Plywood ma ọ bụ osisi
Ebee ka ịzụta na otu esi ahọrọ?
N'ebe ndị na-agụ akwụkwọ anyị na-arịọ, anyị na-ede obere obere foto.
[ngwellery id = 27]
Tụlee onu dị ka ọkọlọtọ mara mma ma kwadoro maka mkpa nke quails. Ahịa nke mkpụrụ ndụ ndị dị otú a na-eme n'ọtụtụ ahịa ahịa nnụnụ ma nwee ụdị na atụmatụ ndị a:
mgbidi azụ ga-adị sentimita 18 n'ịdị elu;
n'ihu mgbidi - 20 centimita elu;
grid cell maka akụkụ ala 12 site na 12 mm nwere eriri waya nke 0.9-2.0 mm;
maka ezigbo mgbakọ egg ala ikuku kwesịrị ịdị 10 Celsius;
akwa akwa, na-arụ ọrụ n'akụkụ ọnụ, na-eme ihe dị ka centimeters;
Anyị na-eweta nke oghere nke quail, nke a na-ahaziri maka mmepụta onwe ya, gụọkwa foto ole na ole nke emechara atụmatụ.
Nke a bụ ole na ole ndị ọzọ, nke ọ dị iche, adịghị iche dị ukwuu site na ụdị ọkọlọtọ egosiri n'elu.
Mgbakọ nke ụlọ a rụchara ga-ewe ihe dị ka awa abụọ. Mana maka nke a, anyị ji nlezianya na-eme ihe ọ bụla.
Echekwa isi ihe dịka 105 na centimeters 70. Site na mgbidi dị n'akụkụ ala ya dị 30 ruo 30 sentimita.
Ugbu a, anyị na-agbanye isi ụlọ ọrụ na-esonụ nha:
n'ihu mgbidi Isi-ya di cubit iri na anọ;
mgbidi azụ 14 n 'elu nke elu;
mgbidi obosara, dị ka e kwuru n'elu, bụ 30 centimeters;
ihe ndị ọzọ na-arụ jiri na-ezo aka na onye na-anakọta akwa.
Iji mgbanaka plastik ma ọ bụ waya (nhọrọ mbụ ga-aka mma), mechie mgbidi n'akụkụ. Ihe ọzọ na-abịa na njedebe nke akwa akwa, nke na-eche na ịdị elu ya aghaghị ịbụ ihe na-erughị 3 sentimita.
Ị nwere mmasị na etu esi eto vine na Siberia? Azịza ya dị n'isiokwu a.
A na-eji ụkwụ na-ekpuchi sistemnke dị ntakịrị karịa ka isi. Iji mee ka ala ahụ kwụsie ike karị, anyị na-eme ka ụlọ mkpọrọ ahụ dị ike site na ígwè ma ọ bụ eriri igwe;
A na-ebipụ ụzọ ahụ n'elu, ma ọ nwere ike ịbụ obosara n'ofe dum elu, maka ka mma.
Iji nweta akụkụ aka nri n'elu bend nke net, ọ bụghịkwa analogs ha, anyị na-eji ya na-eji okpukpu abụọ mbadamba nkume rụọ, 5 centimeters oké, nke jikọtara ya na loops. A na-etinye okporo maka mkpụrụ ndụ nke quails n'ime ọdịiche ahụ nke etiti n'etiti mbadamba, tụọ ụda rịọrọ dị mkpa ma tụgharịa mbadamba.
Ngwunye Quail site n'ókè nke ọdịnaya nke ihe ọ bụla ịnweta bekee dị nnọọ elu karịa ọkụkọ.
Cell na-akwadoe wezụga ala, ogidi mgbidi ya na-ejekwa ozi. Ha na-enye ohere dị mkpa iji tinye nkeda awụba. A na-eji fiberboard, plywood ma ọ bụ osisi slaze.
Achọrọ ya ihe achọrọ - ọgwụgwọ usoro ihe ngwọta nke antiseptic iji zere isi ísì ụtọ nke nnu nsị nke quail droppings malitere.
Na nke a na mkpirikpi, n'ihi na, dị ka a na-achị, ndị ọkachamara na ozuzu quails na-eji nkwụ waya. Lee isi ihe bụ plywood, ọ bụ nanị ala ka e mere, dị ka nke mbụ, site na waya.
Ugbo maka quail plywood nwere akụkụ ndị a:
mgbidi azụ Isi-ya di cubit iri na ise;
n'ihu mgbidi nwere elu 20 centimeters;
ala nwere mkpọda nke 10 Celsius.
A na - eji ihe antiseptic eme ihe niile na mbido, i nwekwara ike iji ebe dị ọcha.
Ọ bụrụ na ịzụta oghere a kụrụ, mgbe ahụ ọ bụla nnụnụ nwere ike ịbụ ebe maka ịzụta dị otú ahụ. Ọnụahịa nke cell dị ihe dịka 2000 rubles.
Ọ bụrụ na ịzụta okporo ụzọ maka sel ma mee ya onwe gị, mgbe ahụ ụgwọ ahụ ga-abụ ọnụahịa nke mita 1. m okporo.
Jide n'aka na nti:
isi ihe na usoro cell nhọrọ, ọ bụ metal na galvanized ntupu;
ebe ndị na-azụ nri na ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ - n'azụ mgbidi, na ụgbụ ụgbụ ahụ kwesịrị ịdị ka nnụnụ ahụ na-esi na-eri nri na mmiri nwere ike ịdakwasị ya n'isi, ma ọ gakwaghị adị;
elu nke cell kwesịrị ịbụ ihe karịrị 20 centimetersNke a kpatara site na eziokwu ahụ bụ quail na-achọ ịmalite elu ngwa ngwa, na usoro nke idebe ya na ndọrọ n'agha ọ nwere ike ibelata ma ọ bụ merụọ isi ya n'elu elu nke ụlọ ahụ;
ọ ga-etinye igbe ahụebe nsen ga-agbanye, nke a bụ n'ihi na nsen quail dina n'ala n'ala;
n'otu ụzọ ahụ ọ dị mkpa na a na-etinye eriri a na-awụnye akwa n'ime ogherema ọ bụrụ na àkwá ga-abụ ájá na ihe ize ndụ nke ọrịa na-efe efe na nnụnụ ga-amụba.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji abụọ ndị na-eme ka bonka dị na mgbidi, ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-ejikọta na mgbidi mgbidi.
N'okpuru ala nke cell a na-achọsi ike iji gbasaa akwụkwọ akụkọ, n'ihi na ihe ndị ahụ na-agbaba akwụkwọ ga-ada n'ala mgbe a kpochara pan na disinfected, akwụkwọ akụkọ ga-'achịkọta' ha.
Iji kpochapụ ísì ụtọ nke nnu nnu, a na-ehicha pallet otu ugboro ma ọ bụ abụọ kwa ụbọchị, ụzọ isi kpochapụ isi nke ịkụba ihe, bụ ihe nkedo nke mbụ.
Nwere ike iji pallets abụọ, otu n'ime ha "na-arụ ọrụ" ma nke ọzọ abanyela.
Iji belata nsogbu nke uzuzu sitere na ahihia akọrọ, e nwere ụzọ abụọ nke mbụ - nke a bu nri na anu mmiri, nke abụọ - nchịkọta nke ndị nchịkọta ájá ma ọ bụ anthers, nke a na-ehicha ma tinye ya n'elu ụlọ, ya mere ọ ga-ekwe omume idozi nsogbu nke ikuku mmiri, nke na-adịghị achọsi ike maka quails.
Iji mee ka ọnụ ọgụgụ quails dị tinye batrị batrị, n'ọnọdụ a, ọnụ ụzọ ga-emeghe n'ihu, ebe nchekwa dị ala dị ala karịa mita 1 site na ala - nnụnụ a na-atụ egwu iwepụta.
Ka ọ dị ugbu a, ọganihu quail, bụ nke jupụtara n'ime afọ ndị 1990, adịla ezigbo njọ. Otú ọ dị, uru nke anụ quail na àkwá adịghị ebelata. Nri anụ N'oge niile, ọ bụ ihe oriri, e ji ọka quail mee ihe na tebụl eze.
Nwunye Quail n'ihe gbasara ọdịnaya nke ihe ọ bụla ịnweta bekee dị elu karịa ọkụkọ. Karịsịa, ọdịnaya magnesium n'ime ha dị okpukpu atọ karịa, ígwè dịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke atọ.
Na Ndị ọkachamara na-enwe ekele maka ha n'ihi ọdịnaya ha dị elu.nke bụ otu ihe dị mkpa nke usoro hematopoietic, na-akwalite metabolism n'ime sel ma bụrụ akụkụ nke enzymes dị iche iche.
Otu ihe a na-emetụtakwa ọdịnaya nke vitamin, ebe a bụ ihe bụ isi nke anụ ugbo quail bụ eziokwu ahụ vitamin A n'ime ha dị okpukpu abụọ karịa na nsen anụ ọkụkọ.
Okpueze Quail, ihe bara uru bara uru n'ime ya, na-agbanye, dị ka ihe oriri.
Barberry Ottawa Superba: nkọwa na nlekọta
Atụmatụ nke iji osisi ibu regulator "Vympel"
Kedu esi echekwa zucchini n'ime ulo na oyi site n'enyemaka nke friji n'ụzọ ziri ezi?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Na-eme cages maka quail mee ya n'onwe gị